Fonzarelli Arthur 80 – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
ကို 2.5 နာရီ
ကို 8 kW (10.7 ကိုမြင်းကောင်ရေ)
ကို 80% ကို 1 နာရီအကြာတွင်
Arthur 80 သည်သြစတြေးလျမှလျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်ထုတ်လုပ်သူ Fonzarelli မှလျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏အမည်ကို ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကတီဗွီမှ Happy Days မှဇာတ်ကောင် Fonzie မှလှုံ့ဆော်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ credo သည် “ Bespoke styling. Amped up performance. And most importantly, zero emissions” ။
Arthur 80 Scooter ကိုချွေတာရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးပျမ်းမျှနေ့စဉ်အသုံးပြုမှုဖြင့်တစ်ပတ်ကိုဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာခန့်သုံးစွဲသည်။
စကူတာတွင် ၈၀၀၀ ဝပ်ဝပ်လျှပ်စစ်မော်တာတစ်ခုရှိပြီးအမြန်နှုန်း ၈၀ ကီလိုမီတာရှိသည်။
Scooter တွင်ဖယ်ရှားနိုင်သော Lithium Battery ကိုအကွာအဝေး ၁၀၀ ကီလိုမီတာရှိသည်။ ၈၀% ကောက်ခံမှုအတွက် ၁ နာရီဖြစ်သည်။
Scooter ကိုမည်သည့်အရောင်ဖြင့်မဆိုရရှိနိုင်ပြီး FonzLab မှကိုယ်ပိုင် ပြုလုပ်နိုင်သည် ။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကွဲပြားသောစိတ်လှုပ်ရှားစရာများနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုကျွန်ုပ်တို့၏စီးနင်းမှုမှလိုချင်ကြသည်။ FonzLab တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုဖြစ်မြောက်စေသည်။ ဤတွင်သင်၏ Fonzarelli သည်သင်၏လူနေမှုပုံစံနှင့်ကိုက်ညီရန်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်နည်းပညာအဆင့်မြှင့်တင်မှုများမှသည်ဒီဇိုင်းပုံစံအတိုင်းပြုလုပ်ရန်။
Scooter ကို online မှာယူနိုင်ပါတယ်။
ကို 2020 Fonzarelli ကိုမော်ဒယ်များ
Fonzarelli ဆိုင်ကယ်အားလုံးကို filter ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တွင်ကြည့်ပါ။